Uma kungenjalo zonke, abadlali abaningi abanokuhlangenwe chip ihluzo ihlangabezana nezidingo zokuhlola ezasungulwa ezinye umdlalo kaningi ukubona ukuvela kwemibiko ukuthi umshayeli isiqophi wayeka besabela useluleme ngempumelelo. Nokho ngingathanda nje qaphelani, kodwa kukhona ngezinye izikhathi ukwehluleka kungase kuhambisane ukubonakala "screen blue". Futhi lokhu kuwuphawu lokuthi uhlelo isiqophi ngekhompyutha ukuthi akulungile.
Iphutha "isiqophi umshayeli wayeka besabela useluleme ngempumelelo": yisiphi isizathu?
Ngaphambi kokunquma ukuqeda le nkinga, kufanele uqonde izizathu kwavela kwehluleka. Uma umshayeli isiqophi wayeka ephendula, izizathu zokushaywa lesi simo ngokuvamile ukuyichaza eshayisana uhlelo isiqophi nesofthiwe, futhi 'nensimbi' level.
Njengoba wazi, emakethe namuhla isiqophi ikhadi kungokwalabo kuphela abakhiqizi Izinhlobo ezimbili ezinamandla kakhulu - AMD NVIDIA. Noma kunjalo, ngisho lamadolobha esimanjemanje kakhulu imifanekiso yabo azigomekile ayiswe Windows uhlelo umyalezo wokuthi iphutha kudivayisi iphutha (isiqophi umshayeli wema ephendula). Isithombe esikrinini iqinile, bese ilengela computer. Isizathu esilula lesi simo itholakala lokuthi ukuthi ihluzo ikhadi efakwe kungaba namandla kakhulu noma buthaka kakhulu ohlelweni.
Esimeni sesibili, inkinga wukuthi uhlelo lokusebenza wokugaya ngokuya information processing ngaphambi ihluzo chip. Esimweni sokuqala, isimo nje okuphambene - uhlelo akusho ukuhambisana ikhadi processor ihluzo, okuyinto ethatha indima eyinhloko kule ekhiqizwa elintantayo-iphuzu izibalo. Kodwa eqinisweni, futhi kwenye samuntu, le okweqile ekhadini kungathatha indawo, futhi igcwele nemiphumela.
umshayeli Ukugunda (i-Kernel) liyeka ukuphendula (ibuyiselwe ngempumelelo) njengoba kufakazelwa umlando inkinga
Uma lokumba okushiwo inkinga, kulula ukubona ukuthi wavela kuphela ngenguqulo yesistimu yokusebenza Windows XP, kanye nokuhluleka ezifana zitholiwe kuphela ngokusebenzisa imidlalo khudlwana ihluzo ngakuthathu. I-CPU kanye RAM, kwacaca ukuthi, kwakungadingeki kuboniswe nganoma iyiphi indlela (ngisho ku "Task Manager" umthwalo iprosesa, inkumbulo noma disk ukufinyelela kungenzeka sakugcina). Futhi uhlelo namanje kuthé.
Bulala izinqubo ezihlobene ne-ihluzo chip ngokuvamile kungenzeka kuphela ngokusebenzisa ukungaqaliswa yayo kule "Task Manager" noma ayeke ukuzithiba isicelo. Ngokwesibonelo, uma umshayeli isiqophi (AMD Driver) wayeka ephendula, esimweni engcono ngeke kuphela ukukhubaza console esihambisanayo (noma lisuse kusukela uqalisa). Kodwa uma ubheka, inkinga yinto ijule ngokungaphezulu.
Le nqubo ngokushesha ukuxazulula inkinga ngokusebenzisa buyisela emuva
Manje siya ukuzijayeza ukuxazulula inkinga (isiqophi umshayeli wema ephendula). Uma umsebenzisi ikhompyutha ncamashi, noma ngisho cishe ukhumbula isikhathi nosuku isimo uhlelo kuze ukuhluleka ezinjalo, akukho lula kunaleyo uyibuyisele esimweni saso sokuqala. Mhlawumbe ukuziphatha ikhadi abathintekayo isofthiwe ezinye zezinkampani zangaphandle ezifana ingxenye, lapho umshayeli ngephutha.
Ukuze buyisela emuva nje faka Isipele / Buyisela ejwayelekile "Control Panel" bese ukhetha iphuzu oyifunayo. Kodwa kuyinto elula ungenza. Ezimweni eziningi inkinga kumele ixazululwe izindlela eyisimanga.
Ngakho, singakwazi ukunikeza omunye ikhambi lenkinga. umshayeli Isiqophi wayeka ephendula, isibonelo, ngenxa version yayo amadala.
Kulesi simo, esinengqondo siwukuthi ephelele umshayeli buyekeza amafayela. Lapha kuphela ukwenza lokhu ngokusebenzisa "Isiphathi sedivayisi" akudingekile - uhlelo isazoqhubeka ukhethe ezifanele kakhulu futhi isimo ukuthi isivele ifakiwe. Shayela nge abashayeli yisikhathi, okungase izikhwebu, futhi, ngeke zisebenze. Ngakho-ke kungcono ukubhekana kuwebhusayithi yomenzi bese ulanda ukusatshalaliswa efanele lapho, unikezwa nesimo sesakhiwo esikhulu yesistimu yokusebenza (32 noma 64 bhithi).
Nokho, lapho kungasetshenziswa elinye ikhambi lenkinga, uma uhlelo ibonisa ukuthi umshayeli vidiyo ibuyiselwe ngempumelelo. Okufanele ukwenze kuleli cala? Isixazululo ilula. Ungakwazi ukufaka yiluphi uhlelo ukucinga ngokuzenzakalelayo futhi ubuyekeze abashayeli. Ngokufanele kuhambisana Driver Ukulekelela.
Kodwa akuzona zonke izinkinga esiba kungatholakala kuphela ihluzo chip. Angehluleka isizathu ezincane kakhulu. Iqiniso lokuthi ezinye imidlalo ethandwa, kodwa ngokucacile ephelelwe yisikhathi zisebenzisa isifaki ukufaka izingxenye ezifana Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable noma ngezansi version wesine Framework. Konke lokhu kubangela ukungasebenzi kwenye ibhuloho, ngokuthi IDirectX.
Lokhu - isixhumanisi phakathi ohlelweni futhi 'nensimbi' amadivayisi abaqashelwa Plug & Play hlobo. Uma umsebenzisi ubona esikrinini sekhompyutha umlayezo ukuthi umshayeli isiqophi wayeka besabela useluleme ngempumelelo, ngokuyisisekelo wukuthi ihluzo chip nje akanawo isikhathi ukucubungula ulwazi engenayo. Isibuyekezo se- iDirectX, efakwe kusukela Microsoft website esemthethweni kuyasiza.
Ukuvimbela hardware iziphequluli
Enye inkinga nabasebenzisi abaningi - ukufakwa elingalungile noma ukungabi Ukuvuselelwa kwenye yezingxenye ezibalulekile kunazo - Adobe Flash Player. Kodwa kulokhu, iphutha ngenxa yokuthi umshayeli isiqophi wayeka besabela useluleme ngempumelelo, libhekisela kuphela phezu Internet, nakuba kubonakala, umthwalo phezu ihluzo chip lapha kufanele kube omncane.
Noma kunjalo, njengoba omunye okukhethwa kukho ukuxazulula izinkinga, ungathuthukisa sipho izandiso kusuka indawo esemthethweni. Ukuze wenze lokhu, vele uye ezifanele isisetshenziswa, thwebula bese ufake inguqulo yakamuva ye-Adobe Flash Player futhi Shockwave Player. Nokho, ngezinye izikhathi phakathi izingxenye ezimbili singenzeka izingxabano kuhleleka, ngakho kungase kudingeke ukukhubaza omunye wabo kuzilungiselelo kusiphequluli sakho futhi ubone ukuthi le ndlela liziphathe kuleli cala.
Ukusetshenziswa anti-aliasing izihlungi
Esinye isizathu sokuba yokuthi kukhona ukwehluleka jikelele, okubonisa ukuthi umshayeli isiqophi wayeka besabela useluleme ngempumelelo, kungase kube ukumisa engalungile lemifanekiso bushelelezi (antialiasing).
Ingqikithi inkinga itholakala lokuthi ukuthi lemifanekiso izilungiselelo umdlalo kungenziwa luvulwe futhi ihluzo izilungiselelo chip, lokhu kukhetha ekhubazekile noma isethwe ekusetheni imodi esikhundleni. Njengoba kusobala kufanele alethwe ku izilungiselelo umugca kucondzanisa.
Ukusebenzisa izilungiselelo zohlelo Registry
Ekugcineni, ukuxazulula inkinga, ungakwazi ukusebenzisa izindlela eziyisisekelo. Ngenxa yalesi kubalulekile ukusebenzisa umhleli ebhukwini, ngokuthi regedit umyalo ngokusebenzisa console "Run» (Win R).
Ngemva ngemvume liyadingeka ukuze udlulisele legatsha HKLM futhi uthole lwemibhalo GraphicsDrivers, lapho sinesithakazelo kwesikwenzayo amagugu izihluthulelo ezimbili - TdrDelay futhi TdrLevel. Uma ingekho, kuzomele udale amabili-32-bit DWORD ukubaluleka ubanikeze amagama afanele.
Ngaphezu kwalokho, kukhona izinketho eziningana for kokufaka amagugu kunesidingo. Amanani alandelayo angasetshenziswa TdrLevel ezingeni:
0 - ngokuphelele zikhutshaziwe;
1 - Iphutha ukuthola ngaphandle ukutakula
2 - ukunciphisa (i ngemodi ye-VGA akuyona sikhona);
3 - yokutakula sokuvala (ukubambezeleka).
Ukuze TdrDelay ipharamitha isethelwe inani elimisiwe angu-2. Kungaba bazame ukushintsha yona-3 noma ngaphezulu, bese uvala ukhetho odlule (kodwa hhayi okuphambene nalokho). Ukuze izinguquko zenzeke, kufanele enze uhlelo sokuqalisa kabusha ngokugcwele.
Le isixazululo awunankinga esimweni lapho kwenzeka iphutha ngesikhathi umshayeli akudingi ukuqalisa phansi, kodwa inkinga ngokwayo kuphela imvelo kohlelo. Kungenjalo, uhlelo hang ingavuthi njalo, ngakho udinga ukusetha amagugu yanjalo kokuzisebenzisa kuye ngokuthi isimo.
Ukubuyekeza BIOS futhi Overclocking imibuzo
Futhi umbuzo owodwa ngaphezulu, okuyinto kuhlobene isimo. Kungenzeka ukuthi inkinga itholakala lokuthi ukuthi ikhadi has inguqulo endala ye BIOS. Ukuze uqalise udinga nje ukubuyekeza firmware usebenzisa ebhuthini kusukela isisetshenziswa olusemthethweni umenzi ihluzo chip.
Uma Nokho, kubangele amaphutha kanye ukuphazamiseka alethwe overloking (ukusheshisa ihluzo processor), isibonelo, uHlelo izindlela, izilungiselelo ezizenzakalelayo kumele isethwe ukucushwa chip.
Kodwa ngisho lapha kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ungasetha kancane ephakeme voltage ezingeni ukusetshenziselwa lokhu Afterburner hlelo. Kodwa ukwenza ukuhlinzwa okunjalo kufanele kube kuphela uma kwenzeka ukuthi uhlelo eseyi has a Ukupholisa ezinhle.
Omunye izimo Kunconywa kungenziwa ngokuthi kuleyo khompyutha ngokushesha ngemuva kokuqeda imidlalo isisetshenziswa khudlwana ayikwazi inqanyuliwe. Kudingeka ukusebenzisa isikhashana imizuzu okungenani ambalwa, bese ukuthatha lolu hambo.
Kwezinye izimo, Isimanga siwukuthi, indlela yokuphuma kuyinto vimbela Aero imiphumela, futhi esimweni PC umile - ukususa noma esikhundleni omunye emapheshana inkumbulo.
Ngokuvamile, ikhadi ihluzo ukuletha ngomqondo kungaba futhi ngenxa ukususwa Uhlelo wayo ukulawula siqu, uma izilungiselelo bayonikezwa kuphela Windows. Nokho, ukwenza lokhu ke kuphela Kunconywa njengendlela yokugcina lapho kungekho lutho olunye olwenzayo kuyasiza.
Ekugcineni, wena umane kabusha ATI PowerNow noma NVIDIA PowerMizer, uma isicelo kwalamatheknoloji iyasebenza.
Njengoba singabona kusukela osekushiwo, nezimo avuse ukubukeka lolu hlobo ukuhluleka kungaba impela eningi. Nokho, izinkinga futhi amasu okuxazulula inkinga esetshenziswa esimweni ngasinye silula futhi oluqondile kusuka umsebenzisi ayidingekile. Nokho waphinda kungcono ukuthola imbangela bese athathe isinqumo isicelo indlela. Uma umsebenzisi ideskithophu computer esitholakalayo khulula-ukuma uhlelo iyunithi, udinga okungenani enze gqwa dusting izingxenye kwangaphakathi, kuhlanganise ikhadi ihluzo, ngoba ezikhathini eziningi, le okweqile yiso ngenxa yalesi sizathu. Njengoba for amasu isofthiwe kufanele izame, ikakhulukazi uma Imbangela iphutha futhi ukwehluleka concomitant kungukuthi ngokunembile echaziwe.
Kanjani ukwakha umbhalo oqoshiwe enhle e "Photoshop"
Ambassador City Jomtien 3 * Ingadi Wing: izibuyekezo, izithombe